မနေ့က ထိုင်းနိုင်ငံမှာအပြစ်မဲ့ လူပေါင်းများစွာကို ရမ်းကား ပစ်တ်ခတ်သတ်ဖြတ်ခဲ့သည့် တပ်ကြပ်ကြီး အား Terminal 21 စင်ထရယ် LG အထပ်တွင် အသေပစ်ခတ်ဖမ်းဆီးခဲ့ (ဖြစ်စဉ်အပြည့်စုံ) – GuGuGarGar
ထိုင်း နိုင်ငံ နခွန်ရတ်ခ်ျစီမာ ပြည်နယ် ခိုရတ်မြို့ နယ် အမှတ် ( ၂ ) တိုင်းစစ်ဌာနချုပ် လက်အောက်ခံ အမှတ် (၂၂ ) ပိတ်ဆို့ရေးတပ်မှ အသက် ၃၂ အရွယ် လက်ဖြောင့်တပ်ကြပ်ကြီး ကျတ်ကဖတ်သည် ဖေဖဝါရီလ ၈ ရက်နေ့ညနေ ၁၅:၀၀ ချိန်ခန့်တွင် သူ၏တပ်ရင်းမှူးဖြစ်သူ ဗိုလ်မှူးကြီး အနန်းလို့ ( ၄၈ ) နှစ်နှင့်ယောက္ခမဖြစ်သူ အသက် (၆၅) နှစ်အရွယ် နန်းအနုန်းတို့အား ၎င်းရပိုင်ခွင့် ငွေ ဘတ် ၅ သောင်းတောင်းယူရာမှမကျေနပ်၍ နေအိမ်တွင် ၉မမ ပစ္စတိုဖြင့်ပစ်ခတ်သတ်ဖြတ်ခဲ့ပြီး Humvee -H1 စစ်သုံးဂျစ်ကားတစ်စီးကိုယူဆောင်ကာ လက်နက်တိုက်မှ စစ်သည်နှစ်ယောက်ကိုသူ၏သေနတ်ဖြင့်ထပ်မံပစ်ခတ်ခဲ့သဖြင့် ၁ ဦးသေဆုံး ၊ တစ်ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီး လက်နက်တိုက်မှ လက်နက်အတိုအရှည်များ ၊ ခဲယမ်းမီးကျောက်ကျည်ဆံ ၇၃၆ တောင့် ၊ လက်ပစ်ဗုံးများယူ​ယူဆောင်သွားခဲ့ပြီး တပ်ရင်းဌာနချုပ်မှမောင်းထွက်လာသည့်လမ်းတစ်လျှေက်အပြစ်မဲ့ပြည်သူများ ၊ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များကိုပစ်ခတ်သတ်ဖြတ်ခဲ့သည် ။
ထို့နောက် ၁၇:၀၀ ချိန်ခန့်တွင် Terminal-21 စင်ထရယ်ကုန်တိုက်ရှေ့ရောက်ရှိပြီး Humvee ကားကိုရပ်ကာနောက်မှလိုက်လာသည့်တပ်ဖွဲ့ဝင်များကိုထပ်မံပစ်ခတ်ခဲ့ပြီး ၁၇:၃၀ ချိန်တွင် ကုန်တိုက်အတွင်းဝင်ရောက်ကာ အပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေပစ်ခတ်သတ်ဖြတ်ခဲ့သဖြင့်သေဆုံးသူဦးရေ ၁၄ ယောက်အထိရှိပြီးဒဏ်ရာရရှိသူတွေလည်း ၂၀ ကျော်အထိရှိလာခဲ့သည်ဟုသိရ ။
အပြစ်မဲ့ လူပေါင်းများစွာကို ရမ်းကား ပစ်တ်ခတ်သတ်ဖြတ်ခဲ့သည့် တပ်ကြပ်ကြီး အား Terminal 21 စင်ထရယ် LG အထပ်တွင် အသေပစ်ခတ်ဖမ်းဆီးခဲ့
အဲ့ဒီနောက် တစ်ကိုယ်တော်လူသမားသည်ဓါးစာခံပြည်သူ ၁၆ ယောက်ခန့်ကိုဝိုင်းရံထားကာ ၄ ထပ်မြောက်တွင်အတူရှိနေပြီး အပြင်မှ ရဲကွန်မန်ဒိုအဖွဲ့နှင့်အကြမ်းဖက်နှိမ်နှင်းရေးပူးပေါင်းရေးအဖွဲ့ ၇၀ ခန့်ဟာ ကုန်တိုက်ပတ်ပတ်လည် ၂ ကီလိုအကွာအဝေးကို တားဆီးဝိုင်းရံထားလိုက်ကြပြီး ပိတ်မိနေတဲ့အများပြည်သူကလေးငယ် ၅၀၀ နီးပါး ၁၀ ယောက်တစ်သုတ်စီခေါ်ယူခဲ့ပြီး လုံခြုံစိတ်ချရသောနေရာများသို့ တစ်ညလုံးဆွဲထုတ်နေခဲ့ကြရသည် ။
၁၈:၀၀ ချိန်တွင် လူသတ်သမားသည် ကုန်တိုက်၏အနောက်ဘက် Gas အိုးများထားရှိသည့်နေရာတွင်ပစ်ဖောက်ခွဲပြီးမီတောက်မီးလျှံများနှင့် သူ့ကိုယ်သူဆဲလ်ဖီဓါတ်ပုံရိုက်ကာသူ၏ လူမှုကွန်ယက်စာမျာက်နှာတွင် ပို့စ်များကိုအချိန်တိုင်း တင်ခဲ့သည် ၊ သူ၏ပို့စ်များတွင်
” ၃ လောင်းတော့ဂလဲ့စားချေပြီးပြီ ကျန်တဲ့သူတွေကိုယ့်ကိုကိုယ်ကာကွယ်ကြပါ ”
” လိမ်လည်လှည့်စားပြီးချမ်းသာလာတဲ့​ငွေကို သေတဲ့အထိယူသွားလို့ရမလား ”
” နောက်ဆုံးတော့ လူတိုင်းသေခြင်းတရားကို ပြေးမလွတ်ပါဘူး ”
” မင်တို့တွေငါ့ကိုစမ်းချင်နေတာလား ဟုတ်လား ? ”
” ငါ့လက်ညိုးတွေ လှုပ်မရတော့ဘူး ”
” အရှုံးပေးလိုက်ရင်ကောင်းမလား ”
” သေပြီ ကြွက်တက်နေပြီ ”
အဲ့ဒီအချိန်မှာ ကုန်တိုက်ရှေ့မှာ ၃ ယောက်ကိုကျည်ထိမှန်သေဆုံးခဲ့ပြီး သွေးအေးအေးနဲ့ပစ်ချင်နေသလိုပစ်နေခြင်းကြောင့် သူ၏ဖေ့စ်ဘုတ်စာမျက်မှာ ဝင်ရောက်ဆဲဆိုသူတွေများလာပြီး သူ၏လုပ်ဆောင်မှုတစ်ခုပြီးဆုံးတိုင်းပြီးတိုင်း မိနစ်ပိုင်းမှာ ပို့စ်တွေတက်နေသဖြင့် သူ၏ဖေစ်ြဘုတ်အား အစိုးရမှ ၁၉:၀၀ ချိန်တွင်ဖြုတ်ချပစ်လိုက်ပြီး ၎င်း၏ဖုန်းအသုံးပြုမှုကိုပိတ်ပင်ဖြတ်တောက်ပသ်လိုက်ပါသည် ။
တစ်ပို့တွဲလပြည့်နေဖြစ်၍ စင်ထရယ်တွင် သာမာန်ရက်ထက် လာရောက်ဈေးဝယ်သူများပြားခြင်းကြောင့် ကုန်တိုက်ထဲတွင်လူဦျးရကို အတိအကျမသိရသလို သေဆုံးသူနှင့်ဒဏ်ရာရရှိသူများရဲ့အရေအတွက် ကိုလည်း အတိအကျမထုတ်ပြန်နိုင်ပေမယ့် ဆေးရုံ ၇ ခုစလုံးကိုအသင့်ပြင်ဆင်ထားရန်ကျမ္မာရေးဝန်ကြီးကအနီးကပ်အုပ်ချုပ်ညွှန်ကြားခဲ့သည် ။
ကုန်တိုက်ရှေ့ ကိုက် ၅၀၀ အကွာ မိတဖတ်လမ်းကြီးရဲ့ တစ်နေရာတွင် ကမ္ဘာ့သတင်းထောက်များကို သီးသန့်နေရာပေးကာ လမ်းကြောင်းအားအသေးစိတ်ရှင်းလင်း၍ အရေးပေါ်လူနာတင်ယာဉ် ၁၀ စီးကျော်ကို Standby Line Up ထိုးကာ ဒဏ်ရာရရှိသူတွေကိုကယ်ထုတ်ဘို့ပြင်ဆင်ထားပြီး အခင်းဖြစ်တဲ့နေရာကို ထိုင်းရဲချုပ် ၊ ကာချုပ်နှင့်စစ်တိုင်းမှူးများပါရောက်ရှိလာကာအနီးကပ်ကွပ်ကဲမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်..
၂၁:၁၀ ချိန်တွင်တာဝန်ရှိရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဒဏ်ရာရရသည် ။
၂၀:၁၇ ချိန်တွင်ဒဏ်ရာရရှိထားသူပြည်သူတစ်ဦးကိုကယ်ထုတ်နိုင်ခဲ့သည် ။
၂၀:၂၅ ချိန်မှာ ဒဏ်ရာရရှိသူရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးကိုကယ်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပြန်သည် ။
ည ၂၁:၃၀ ချိန်ခန့်မှာတော့ ကုန်တိုက်ရဲ့အနောက်ဘက် မှာပုန်းအောင်းနေတဲ့ပြည်သူတစ်ချို့ကို တဖြည်းဖြည်း ၁၀ ယောက်တစ်သုပ်စီခွဲထုတ်ကာကွန်မန်ဒိုအဖွဲ့တွေကကယ်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ် ။
ည ၂၂:၀၀ ချိန်မှာ LG အထပ်ကိုကွန်မန်ိးုအထူးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရှင်းလင်းနိုင်ခဲ့ပြီးသတင်အခြေပြုထားကာ ပိတ်မိနေတဲ့ပြည်သူတွေကိုဦးစားပေးအနေဖြင့် ကယ်တင်မှုတွေပြုလုပ်ကြပါတယ်..
ည ၂၂:၀၆ ချိန်မှာတော့ ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဒုဗိုလ်မှုးကြီး ခုန်ချစ်မှ သေဆုံးသူ ၂၀ ဦးနှင့် ဒဏ်ရာရရှိသူ ၃၁ ဦးရှိပြီးဖြစ်ကြောင်းအတည်ပြုပြောကြားခဲ့ပါတယ် ၊ သေဆုံးသူများထဲတွင် မဟာရတ်ဗဟိုဆေးရုံ၌ သေဆုံးခဲ့သူ ၄ ဦးရှိကြောင်းနှင့်စိုးရိမ်ရသူ ၄ ဦးရှိကြောင်းသိရသည် ။
၂၃:၅၃ ချိန်တွင် ရဲမှူးချုပ် ကျိလဖုတ် ဦးစီးတဲ့အထူးကွန်မန်းစနိုက်ပါရဲတပ်ဖွဲ့ ” ဟန်နုမာန်” အဖွဲ့ထပ်မံရောက်ရှိလာခဲ့သည် ၊ အဲ့ဒီနောက် Floor 1/2/3/4/5 ထပ်အထိ Clear လုပ်နိုင်ခဲ့ပြီး အိမ်သာထဲနှင့်နေရာအနှံတွင်ပုန်းအောင်းနေသောပြည်သူအချို့ကိုကယ်တင်နိုင်ခဲ့သည် ။
ည ၀၁:၀၀ ချိန်ခန့်တွင် ကုန်တိုက် ၇ ထပ်ရဲ့အထက်လေဟာပြင်ကိုတက်၍ လမ်းမပေါ်မှတာဝန်ရှိသူတွေနှင့်အပြန်အလှန်စကားပြောဆိုရင်း သေနတ်သံ ၄/၅ ချက်ထွက်ပေါ်ပြီးအသံတွေတိတ်သွားခဲ့ပြီးနောက် တစ်ညလုံးအခြေအနေတွေကိုစောင့်ကြည့်ခဲ့ကြရင်း ကုန်တိုက်အတွင်းဒဏ်ရာရရှိသူတွေလည်းရှိနေကြောင်းသိရသဖြင့်ရနိုင်သလေယက်သယ်ထုတ်ခဲ့ကြသည် ။
မနက် ၀၄:၀၀ ချိန်တွင်တစ်ကြိမ် ၊ ဝ၅:၂၀ တစ်ကြိမ်သေနတ်သံများကြားရပြီးနောက် ဒဏ်ရာရရှိသူ ပြည်သူ ၃ ဦးအားသယ်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပြီး အရေးပေါ်ကားများ ၁၀ စီးကျော် ကုန်တိုက်ရဲ့အရှေ့ပေါက်မှနေ၍ Gate-1 သို့သွားရောက်ရန်ညွှန်ကြားခဲ့ ။
၀၈:၃၀ ( နာရီပေါင်း ၁၇:၄၇ မာရီအကြာ ) ချိန်တွင် LG အထပ် နောက်ပေါက်မှလူဆိုးသည်အပြင်သို့ထွက်ပြေးရန်ကြိုးစားစဉ် ကြိုတင်စောင့်ဆိုင်းနေသောကွန်မန်ဒိုအဖွဲ့များနှင်ထိပ်တိုက်ထိတွေ့ပစ်ခတ်ကြရာ တစ်ကိုယ်တော်လူသတ်သမားတပ်ကြပ်ကြီး ကျတ်ကဖတ်အား အသေပသ်ခတ်ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ကြောင်း မနက် ၀၉:၀၀ ချိန်တွင် ဒုတိယဝန်ကြီးချုပ်အနုထင်းမှ သေဆုံးသူဦးရေ ၂၁ ဦး ( လူဆိုးပါအပါ ) နှင့်ဒဏ်ရာရရှိသူ ၄၂ ယောက်မှာ ၂၁ ယောက်အိမ်ပြန်နိုင်ခဲ့ကြောင်း တရားဝင်းသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည် ။ ယခု နောက်ဆုံးရသတင်းများအရ သေဆုံးသူဦးရေဟာ ၂၇ ယောက် ဟု သိရှိရသည်။
သေဆုံးသူများထဲတွင် အသက်အငယ်ဆုံးအရွယ် ၉ နှစ်သားအရွယ် ကလေးငယ်တ ၁ ဦး ၊ တပ်မတော်မှ ဗိုလ်မှူးကြီး ၁ ဦး ၊ ဗိုလ်ကြီး ၁ ဦးနှင့် ရဲအရာခဲဗိုလ် ၁ ဦး ၊ ရဲမှူး ၁ ဦးတို့သေဆုံးခဲ့ကြောင်းကနဦးသတင်းများအရ သိရှိရသည်။ Writer:sithu maung
ထိုငျးနိုငျငံ နခှနျရတျချြစီမာပွညျနယျ ခိုရတျမွို့ နယျ အမှတျ ( ၂ ) တိုငျးစဈဌာနခြုပျလကျအောကျခံ အမှတျ (၂၂ ) ပိတျဆို့ရေးတပျမှ အသကျ ၃၂ အရှယျ လကျဖွောငျ့တပျကွပျကွီး ကတျြကဖတျသညျ ဖဖေဝါရီလ ၈ ရကျနညေ့နေ ၁၅:၀၀ ခြိနျခနျ့တှငျ သူ၏တပျရငျးမှူးဖွဈသူ ဗိုလျမှူးကွီး အနနျးလို့ ( ၄၈ ) နှဈနှငျ့ယောက်ခမဖွဈသူ အသကျ (၆၅) နှဈအရှယျ နနျးအနုနျးတို့အား ၎င်းငျးရပိုငျခှငျ့ ငှေ ဘတျ ၅ သောငျးတောငျးယူရာမှမကနြေပျ၍ နအေိမျတှငျ ၉မမ ပစ်စတိုဖွငျ့ပဈခတျသတျဖွတျခဲ့ပွီး Humvee -H1 စဈသုံးဂဈြကားတဈစီးကိုယူဆောငျကာ လကျနကျတိုကျမှ စဈသညျနှဈယောကျကိုသူ၏သနေတျဖွငျ့ထပျမံပဈခတျခဲ့သဖွငျ့ ၁ ဦးသဆေုံး ၊ တဈဦးဒဏျရာရရှိခဲ့ပွီး လကျနကျတိုကျမှ လကျနကျအတိုအရှညျမြား ၊ ခဲယမျးမီးကြောကျကညျြဆံ ၇၃၆ တောငျ့ ၊ လကျပဈဗုံးမြားယူယူဆောငျသှားခဲ့ပွီး တပျရငျးဌာနခြုပျမှမောငျးထှကျလာသညျ့လမျးတဈလြှေကျအပွဈမဲ့ပွညျသူမြား ၊ ရဲတပျဖှဲ့ဝငျမြားကိုပဈခတျသတျဖွတျခဲ့သညျ ။
ထို့နောကျ ၁၇:၀၀ ခြိနျခနျ့တှငျ Terminal-21 စငျထရယျကုနျတိုကျရှရေ့ောကျရှိပွီး Humvee ကားကိုရပျကာနောကျမှလိုကျလာသညျ့တပျဖှဲ့ဝငျမြားကိုထပျမံပဈခတျခဲ့ပွီး ၁၇:၃၀ ခြိနျတှငျ ကုနျတိုကျအတှငျးဝငျရောကျကာ အပွဈမဲ့ပွညျသူတှပေဈခတျသတျဖွတျခဲ့သဖွငျ့သဆေုံးသူဦးရေ ၁၄ ယောကျအထိရှိပွီးဒဏျရာရရှိသူတှလေညျး ၂၀ ကြျောအထိရှိလာခဲ့သညျဟုသိရ ။
အဲ့ဒီနောကျ တဈကိုယျတျောလူသမားသညျဓါးစာခံပွညျသူ ၁၆ ယောကျခနျ့ကိုဝိုငျးရံထားကာ ၄ ထပျမွောကျတှငျအတူရှိနပွေီး အပွငျမှ ရဲကှနျမနျဒိုအဖှဲ့နှငျ့အကွမျးဖကျနှိမျနှငျးရေးပူးပေါငျးရေးအဖှဲ့ ၇၀ ခနျ့ဟာ ကုနျတိုကျပတျပတျလညျ ၂ ကီလိုအကှာအဝေးကို တားဆီးဝိုငျးရံထားလိုကျကွပွီး ပိတျမိနတေဲ့အမြားပွညျသူကလေးငယျ ၅၀၀ နီးပါး ၁၀ ယောကျတဈသုတျစီချေါယူခဲ့ပွီး လုံခွုံစိတျခရြသောနရောမြားသို့ တဈညလုံးဆှဲထုတျနခေဲ့ကွရသညျ ။
၁၈:၀၀ ခြိနျတှငျ လူသတျသမားသညျ ကုနျတိုကျ၏အနောကျဘကျ Gas အိုးမြားထားရှိသညျ့နရောတှငျပဈဖောကျခှဲပွီးမီတောကျမီးလြှံမြားနှငျ့ သူ့ကိုယျသူဆဲလျဖီဓါတျပုံရိုကျကာသူ၏ လူမှုကှနျယကျစာမြာကျနှာတှငျ ပို့ဈမြားကိုအခြိနျတိုငျး တငျခဲ့သညျ ၊ သူ၏ပို့ဈမြားတှငျ
” ၃ လောငျးတော့ဂလဲ့စားခပြွေီးပွီ ကနျြတဲ့သူတှကေိုယျ့ကိုကိုယျကာကှယျကွပါ ”
” လိမျလညျလှညျ့စားပွီးခမျြးသာလာတဲ့ငှကေို သတေဲ့အထိယူသှားလို့ရမလား ”
” နောကျဆုံးတော့ လူတိုငျးသခွေငျးတရားကို ပွေးမလှတျပါဘူး ”
” မငျတို့တှငေါ့ကိုစမျးခငျြနတောလား ဟုတျလား ? ”
” ငါ့လကျညိုးတှေ လှုပျမရတော့ဘူး ”
” အရှုံးပေးလိုကျရငျကောငျးမလား ”
” သပွေီ ကွှကျတကျနပွေီ ”
အဲ့ဒီအခြိနျမှာ ကုနျတိုကျရှမှေ့ာ ၃ ယောကျကိုကညျြထိမှနျသဆေုံးခဲ့ပွီး သှေးအေးအေးနဲ့ပဈခငျြနသေလိုပဈနခွေငျးကွောငျ့ သူ၏ဖစျေ့ဘုတျစာမကျြမှာ ဝငျရောကျဆဲဆိုသူတှမြေားလာပွီး သူ၏လုပျဆောငျမှုတဈခုပွီးဆုံးတိုငျးပွီးတိုငျး မိနဈပိုငျးမှာ ပို့ဈတှတေကျနသေဖွငျ့ သူ၏ဖွဈေဘုတျအား အစိုးရမှ ၁၉:၀၀ ခြိနျတှငျဖွုတျခပြဈလိုကျပွီး ၎င်းငျး၏ဖုနျးအသုံးပွုမှုကိုပိတျပငျဖွတျတောကျပသျလိုကျပါသညျ ။
တဈပို့တှဲလပွညျ့နဖွေဈ၍ စငျထရယျတှငျ သာမာနျရကျထကျ လာရောကျဈေးဝယျသူမြားပွားခွငျးကွောငျ့ ကုနျတိုကျထဲတှငျလူဦးရြကို အတိအကမြသိရသလို သဆေုံးသူနှငျ့ဒဏျရာရရှိသူမြားရဲ့အရအေတှကျ ကိုလညျး အတိအကမြထုတျပွနျနိုငျပမေယျ့ ဆေးရုံ ၇ ခုစလုံးကိုအသငျ့ပွငျဆငျထားရနျကမ်ြမာရေးဝနျကွီးကအနီးကပျအုပျခြုပျညှနျကွားခဲ့သညျ ။
ကုနျတိုကျရှေ့ ကိုကျ ၅၀၀ အကှာ မိတဖတျလမျးကွီးရဲ့ တဈနရောတှငျ ကမ်ဘာ့သတငျးထောကျမြားကို သီးသနျ့နရောပေးကာ လမျးကွောငျးအားအသေးစိတျရှငျးလငျး၍ အရေးပျေါလူနာတငျယာဉျ ၁၀ စီးကြျောကို Standby Line Up ထိုးကာ ဒဏျရာရရှိသူတှကေိုကယျထုတျဘို့ပွငျဆငျထားပွီး အခငျးဖွဈတဲ့နရောကို ထိုငျးရဲခြုပျ ၊ ကာခြုပျနှငျ့စဈတိုငျးမှူးမြားပါရောကျရှိလာကာအနီးကပျကှပျကဲမှုတှပွေုလုပျခဲ့ကွပါတယျ..
၂၁:၁၀ ခြိနျတှငျတာဝနျရှိရဲတပျဖှဲ့ဝငျတဈဦးဒဏျရာရရသညျ ။
၂၀:၁၇ ခြိနျတှငျဒဏျရာရရှိထားသူပွညျသူတဈဦးကိုကယျထုတျနိုငျခဲ့သညျ ။
၂၀:၂၅ ခြိနျမှာ ဒဏျရာရရှိသူရဲတပျဖှဲ့ဝငျတဈဦးကိုကယျထုတျနိုငျခဲ့ပွနျသညျ ။
ည ၂၁:၃၀ ခြိနျခနျ့မှာတော့ ကုနျတိုကျရဲ့အနောကျဘကျ မှာပုနျးအောငျးနတေဲ့ပွညျသူတဈခြို့ကို တဖွညျးဖွညျး ၁၀ ယောကျတဈသုပျစီခှဲထုတျကာကှနျမနျဒိုအဖှဲ့တှကေကယျထုတျနိုငျခဲ့ပါတယျ ။
ည ၂၂:၀၀ ခြိနျမှာ LG အထပျကိုကှနျမနျိးုအထူးတပျဖှဲ့ဝငျတှရှေငျးလငျးနိုငျခဲ့ပွီးသတငျအခွပွေုထားကာ ပိတျမိနတေဲ့ပွညျသူတှကေိုဦးစားပေးအနဖွေငျ့ ကယျတငျမှုတှပွေုလုပျကွပါတယျ..
ည ၂၂:၀၆ ခြိနျမှာတော့ ကာကှယျရေးဝနျကွီးဌာနမှ ပွောရေးဆိုခှငျ့ရှိသူ ဒုဗိုလျမှုးကွီး ခုနျခဈြမှ သဆေုံးသူ ၂၀ ဦးနှငျ့ ဒဏျရာရရှိသူ ၃၁ ဦးရှိပွီးဖွဈကွောငျးအတညျပွုပွောကွားခဲ့ပါတယျ ၊ သဆေုံးသူမြားထဲတှငျ မဟာရတျဗဟိုဆေးရုံ၌ သဆေုံးခဲ့သူ ၄ ဦးရှိကွောငျးနှငျ့စိုးရိမျရသူ ၄ ဦးရှိကွောငျးသိရသညျ ။
၂၃:၅၃ ခြိနျတှငျ ရဲမှူးခြုပျ ကြိလဖုတျ ဦးစီးတဲ့အထူးကှနျမနျးစနိုကျပါရဲတပျဖှဲ့ ” ဟနျနုမာနျ” အဖှဲ့ထပျမံရောကျရှိလာခဲ့သညျ ၊ အဲ့ဒီနောကျ Floor 1/2/3/4/5 ထပျအထိ Clear လုပျနိုငျခဲ့ပွီး အိမျသာထဲနှငျ့နရောအနှံတှငျပုနျးအောငျးနသေောပွညျသူအခြို့ကိုကယျတငျနိုငျခဲ့သညျ ။
ည ၀၁:၀၀ ခြိနျခနျ့တှငျ ကုနျတိုကျ ၇ ထပျရဲ့အထကျလဟောပွငျကိုတကျ၍ လမျးမပျေါမှတာဝနျရှိသူတှနှေငျ့အပွနျအလှနျစကားပွောဆိုရငျး သနေတျသံ ၄/၅ ခကျြထှကျပျေါပွီးအသံတှတေိတျသှားခဲ့ပွီးနောကျ တဈညလုံးအခွအေနတှေကေိုစောငျ့ကွညျ့ခဲ့ကွရငျး ကုနျတိုကျအတှငျးဒဏျရာရရှိသူတှလေညျးရှိနကွေောငျးသိရသဖွငျ့ရနိုငျသလယေကျသယျထုတျခဲ့ကွသညျ ။
မနကျ ၀၄:၀၀ ခြိနျတှငျတဈကွိမျ ၊ ဝ၅:၂၀ တဈကွိမျသနေတျသံမြားကွားရပွီးနောကျ ဒဏျရာရရှိသူ ပွညျသူ ၃ ဦးအားသယျထုတျနိုငျခဲ့ပွီး အရေးပျေါကားမြား ၁၀ စီးကြျော ကုနျတိုကျရဲ့အရှပေ့ေါကျမှနေ၍ Gate-1 သို့သှားရောကျရနျညှနျကွားခဲ့ ။
၀၈:၃၀ ( နာရီပေါငျး ၁၇:၄၇ မာရီအကွာ ) ခြိနျတှငျ LG အထပျ နောကျပေါကျမှလူဆိုးသညျအပွငျသို့ထှကျပွေးရနျကွိုးစားစဉျ ကွိုတငျစောငျ့ဆိုငျးနသေောကှနျမနျဒိုအဖှဲ့မြားနှငျထိပျတိုကျထိတှပေ့ဈခတျကွရာ တဈကိုယျတျောလူသတျသမားတပျကွပျကွီး ကတျြကဖတျအား အသပေသျခတျဖမျးဆီးရမိခဲ့ကွောငျး မနကျ ၀၉:၀၀ ခြိနျတှငျ ဒုတိယဝနျကွီးခြုပျအနုထငျးမှ သဆေုံးသူဦးရေ ၂၁ ဦး ( လူဆိုးပါအပါ ) နှငျ့ဒဏျရာရရှိသူ ၄၂ ယောကျမှာ ၂၁ ယောကျအိမျပွနျနိုငျခဲ့ကွောငျး တရားဝငျးသတငျးထုတျပွနျခဲ့သညျ ။ ယခု နောကျဆုံးရသတငျးမြားအရ သဆေုံးသူဦးရဟော ၂၇ ယောကျ ဟု သိရှိရသညျ။
သဆေုံးသူမြားထဲတှငျ အသကျအငယျဆုံးအရှယျ ၉ နှဈသားအရှယျ ကလေးငယျတ ၁ ဦး ၊ တပျမတျောမှ ဗိုလျမှူးကွီး ၁ ဦး ၊ ဗိုလျကွီး ၁ ဦးနှငျ့ ရဲအရာခဲဗိုလျ ၁ ဦး ၊ ရဲမှူး ၁ ဦးတို့သဆေုံးခဲ့ကွောငျးကနဦးသတငျးမြားအရ သိရှိရသညျ။
လက်ရှိမှာ စားဖို့ရိက္ခာပြတ်တော့မယ်ဆိုတဲ့ ဝူဟန်မှာ ပိတ်မိနေတဲ့ မြန်မာကျောင်းသားများ ၆၀ ရဲ့ လက်ရှိအခြေအနေ